Qhuba Iminqweno Yakho - Khetha Uphawu
Qhuba Iminqweno Yakho
Kukho inyani yendalo yonke esizalwa nayo sonke - umnqweno. Ibonwa nge Neptune kwitshathi yomntu wonke kunye naloo ndawo yomlingo abanye bethu babalekela kuyo, ngelixa abanye bethu bebaleka, kuxhomekeke kubungakanani boloyiko lokhetho olungenakwenzeka okanye indlela engenakwenzeka yobomi esiyibonayo kubomi bethu bemihla ngemihla. Ebomini bakho uya kudibana nabantu abaninzi abaphoxeke bubomi ngenxa yokuba abanakuyifumana into abayinqwenela kakubi, kwaye le meko yangaphakathi yokulahlekelwa rhoqo kunye nokungakwazi ukubonakalisa isusa ikratshi, ukuzithemba, inkuthazo, kunye nenkuthazo njengoko ixesha lihamba. Ngethamsanqa, kukho abo baphatha itotshi yokukhanya ngaphakathi nangona benokuba ubomi babo kude nembonakalo yabo kunye nelizwe lamaphupha abanqwenela ukuhlala kulo.
Njengomvumisi ngeenkwenkwezi, ndiye ndadibana nabantu abaninzi abeza kumnyango wam benenkangeleko yobuso efanayo, belindele ukuba ndithethe into ezukileyo, into engakholelekiyo, kunye nento eza kutshintsha ubomi babo ngonaphakade. Ngezihlandlo ezinqabileyo kakhulu ndiye ndafumana ithuba lokuchaza ukuba ubomi babo abuchazwanga ziintshukumo esibhakabhakeni kodwa zidityaniswe ngokulula nazo, kwaye ngokuqinisekileyo abuchazwa yinto umntu ophambi kwabo ayiqikelelayo. Kwiimeko ezininzi, ulindelo lusaya kuqaqamba emehlweni abo, yaye kwanaxa kungekho nanye ingqikelelo exeliweyo, baya kusifumana, basicele, baze basimbe ngelona gama lingaqhelekanga bakhethe ukuva.
Ukuba unikela ingqalelo ngokusondeleyo kwindawo yakho, uya kufumana imeko efanayo. Abantu abakungqongileyo baya kuthetha ngeengxaki zabo ngethoni yokwenziwa, bengakulungelanga ukwenza utshintsho oluya kubakhulula. Balindele ukuba umntu othile, okanye into ethile, ibanike izixhobo eziyimfuneko ukuze kubonakaliswe, ukuze isibhakabhaka sivuleke ukuze senziwe ixesha okanye nayiphi na enye into onokucinga ngayo. Bedlulisa amava abo abuhlungu kangaka kuThixo, kwabanye, okanye izijikelezi-langa, eneneni batyhalela kude imbopheleleko yabo, bengakulungelanga ukujongana neyakhe inxalenye yebali ngenxa yokoyika okanye kukudinwa nje.
Kutheni Sisala Ukuthabatha Inyathelo?
Singaxoxa ngesizathu sokukhuliswa kwethu ukunika ubomi bethu ngokulula ezandleni zabanye abantu, okanye kwizandla zekamva, kodwa oku mhlawumbi ayisosizathu sokuba uze kule webhusayithi. Iipateni zethu zibhalwe nzulu kubuntu bethu ukanti, ngokuzithandela Uranus akufanele igxothwe kuyo nayiphi na imeko. Uloyiko luyasithintela ISaturn kwaye Mars , imikhwa yethu kunye neemeko ezisifundise ukuba asinako ukuphumelela kungakhathaliseki ukuba senza ntoni na, iinkolelo ezingakhiyo esaxelelwa kwaye sakhelwe kuzo, kunye nobungqina bethu obufunyenwe ngokuphindaphinda izinto esingazange sizame ukuzitshintsha kumbindi wazo wokwenene. Ngamafutshane, ukuba siye saliva igama elithi ‘hayi’ izihlandlo ezininzi, siya kuliva entlokweni yethu kubo bonke ubomi bethu kwaye liya kukhokela iimeko zethu, nathi.
Inkululeko yokwenene iza njengoko siqonda ukuba enyanisweni SINGAkhetha apho ubomi bethu buya kuya khona. Nangona iimeko zenyama zinokuba yinto esingenakuyichaphazela, kwaye abanye abantu bahlala bephethe izigqibo zabo, imeko yethu yentuthuzelo kunye nokukwazi ukwamkela oko kuza kuthi luxanduva lwethu. Kukwaxhomekeke kuthi ukubonisa inyathelo lokuqala lokusombulula iingxaki zethu, ukuba sizikhokelele kubomi esibunqwenelayo, obupholileyo kwaye sikulungele ukuthatha imingcipheko ixesha nexesha. Umsebenzi weMars enye esempilweni kwitshathi yethu ikulwazi lwethu lokuba sele siphumelele, kwaye akukho nto isibambeleyo ngaphandle kwezithunzi zethu. Iimvakalelo ezingathandekiyo zizibonakaliso kuphela zokuba sifuna utshintsho, kwaye okoko nje sibangcwaba nzulu kwihlabathi lethu elingenangqondo, baya kubuya ukuze basihlasele ngobudlelwane obunzima.
Inyaniso enkulu ekufuneka siyamkele sonke xa sinxulumana nabanye, kukuba wonke umntu osemhlabeni sele esenza konke okusemandleni akhe. Amathemba aphezulu, iimfuno kunye nokulindela ziphelelwe lixesha kule mbono. Ziyimbonakaliso nje yokungakwazi kwethu ukudibanisa ngokwenene nomnye umntu kwaye sibone ukuba balungile ngokwaneleyo njengoko benjalo, nangona mhlawumbi kungekhona kwinqwelo yethu yokuphila. Siza kuhlala kwiindiza ezahlukeneyo zokwazisa kunye nokuqonda, sineminqweno kunye neminqweno eyahlukeneyo, kwaye asinako ukwabelana ngeendlela ezininzi kunye nokuba siphambene eluthandweni.
Sekunjalo, indlela yethu ifanele ukuxatyiswa kunye nenkqubela yethu kukhetho lwethu, isigqibo, kunye noxanduva lwethu. Bamba ivili namhlanje kwaye wenze into yokutshintsha loo nto inye ewumthwalo uMphefumlo wakho. Ngamanye amaxesha kunzima, kodwa unamandla okufezekisa, okanye ngewungazange uzalwe unomnqweno ovuthayo entliziyweni yakho.
Khetha Uphawu Pisces Isagittarius Virgo I-Capricorn